अण्डा कति खाने ? कसरी खाने ? - Prawas Khabar
डा फिलिप्स भन्छन्, ‘एलर्जी नभएका व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारले अण्डा खान सक्छन् । तर अण्डा कसरी बनाउने भन्नेमा
डा. केसीसँग वार्ता अघि बढेन, स्वास्थ्य बिग्रिए पनि उपचार गर्न अस्वीकार
कोइरालाको सुझाव : मनमोहनलाई सम्वन्धन दिऔं, गोविन्द केसीलाई सम्वोधन गरौं